Puree ovy sy karaoty - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
Verduras33 minitraOlona 4
Tena tiako ity puree ity toa arahina ny hena rehetra, indrindra raha manamboatra azy amin'ny grill aho. Na dia azo aroso amin'ny fomba fahandro trondro tsotra aza izy io.
Rehefa manana akoho na felam-pisakafoanana hisakafoanana hariva izahay dia ampiasiko amin'ny sisiny ary manana izany ny zazavavy sakafo hariva feno kokoa miorina amin'ny legioma sy hena.
Tian'ny zanako vavy ny karaoty, raha ny marina, rehefa manisy sakafo atoandro na sakafo hariva aho, dia mangataka amiko foana ny hoditr'izy ireo ny iray amin'izy ireo ary atono azy ireo ho azy ireo. Ka tonga tao an-tsaiko fa izany no izy tonga lafatra hanovana ary tsy manao foana ny ovy nopotsehina. Ary fahombiazana io.
1 Puree ovy sy karaoty
Puree izay azonao ampiasaina ho haingo-kazo hiaraka amin'ny lovia hena na trondro.
Rano 600 g
650 g ovy voahitsakitsaka sy voatetika
Karaoty 300 g, voahitsakitsaka ary voahidy
Voasarimakirana 1 pinch
Ataontsika ao anaty sobika ireo ovy voakelaka sy voatetika. Ny karaoty, voahitsakitsaka ary voahidy, dia apetraka ao anaty fitoeram-bokatra varoma.
Arotsakay ao anaty vera ny rano ary ampidiro ao anaty vera ilay sobika. Manidy ny vera amin'ny sarony izahay ary mametraka ny fitoeran-doko varoma, miaraka amin'ny karaoty, amin'ny toerany.
Izahay dia manao fandaharana 30 minitra, maripana varoma ary hafainganam-pandeha 1.
Esorinay ny kaonteneran'ny varoma sy ny harona. Ariantsika ao anaty vera ny rano.
Napetrakay tao anaty vera, ronono, sira ary voanjo ny karaoty masaka. Izahay dia manao fandaharana 2 minitra, maripana 100º ary hafainganam-pandeha 2. Amin'ny faran'ity fotoana ity dia manao programa izahay 30 segondra, amin'ny hafainganam-pandeha 10.
Izahay dia manampy ny ovy masaka sy dibera. Izahay dia manao fandaharana 20 segondra, amin'ny hafainganam-pandeha 4.
Manompo miaraka amin'ny mafana izahay.
Fanazavana fanampiny - Fomba fahandro fototra: ovy nopotsehina namboly
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Celiac, Salady sy legioma, Tsotra, Tsy mahazaka atody, Latsaky ny adiny 1, Resipeo ho an'ny ankizy, Lasopy sy menaka, tsy mihinan-kena
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Recipe manokana » Celiac » Puree ovy sy karaoty
Salama Helena, tonga lafatra! Nitady fomba hafa ho an'ny kely aho ary tena tsara ity.
Ny hany tokana dia ny ronono tsy azony sotroina ary miaraka amin'ny ronono amandy sotroiny, ny purees dia tsy mivoaka miaraka amin'ny tsiro tena tsara.
Mihevitra ve ianao fa afaka manolo azy amin'ny rano bebe kokoa aho sa hazava tsara? Inona no safidy hafa tokony hanananao?
Miarahaba anao avy any Miami.
Salama Susana, mieritreritra aho fa ho tsara be ianao amin'ny rano. Mbola mila manampy rano kely noho ny ronono ianao, andramo 170 gr. Etsy an-danin'izany, tsy afaka misotro ronono tsy misy lactose ve ny anao? Betsaka ny olona no mandray azy eto, na tsy mahazaka lactose isika na tsia. Fiarahabana lehibe avy any Espana. Lazao amiko ny fijeriny anao.
Tsy afaka mandray kétin ianao, izay proteinina amin'ny omby ary na dia esorinao aza ny lactose, dia mitoetra ao anaty ronono ny casein ka tsy maintsy soloiko ronono legioma sy ireo rehetra izay toa mahasalama kokoa ary misy kalsioma betsaka kokoa. ny an'ny Almonds raisina irery dia tsara, misy tsirony "somary" mitovy amin'ny horchata fa tsy dia tiako loatra rehefa mahandro dia mivoaka mamy kely.
Saingy hanandrana rano aho. Nieritreritra lasopy akoho aza aho tamin'izay efa vita amin'ny tetrabrick mba hanomezana tsiro kely kokoa azy.
Salama Susana, mieritreritra aho fa miaraka amin'ny ron-kena akoho dia afaka ny ho tena tsara ianao, hoy ianao amiko. Oroka.
Maria Teresa Flores Garcia sary placeholder dia hoy izy:
Salama, tiako ity recette ho an'ny puree ity fa manana fanontaniana aho, azo atao amin'ny menaka oliva ve io fa tsy dibera? Misakafo sakafo aho ary aleoko ho menaka tsara kokoa. Miandry ny valinteninao aho, misaotra betsaka anao nanome anay hevitra lehibe toy izany.
Valiny tamin'i Maria Teresa Flores Garcia
Salama María Teresa, vita amin'ny menaka oliva izy io. Mila ampiana vola mitovy amin'izany ianao. Miarahaba ary manantena aho fa tianao izany.
voalohany indrindra miarahaba anao noho ity pejy mahafinaritra ity, dia dinihiko matetika izy ary manao resipeo maro. Ny zava-drehetra dia nohazavaina tamim-pahakingana ary feno tanteraka.
Ankehitriny rehefa miaina irery aho dia manana ny olana fa ny resipeo avoakao dia matetika ho an'ny olona 2 na 4 ary ho an'ny 1 dia manana olana aho. Mihoatra noho ny habetsaky ny fangaro, amin'ny fotoana. Ohatra, ho an'ny recette for macaroni na vary, raha ho an'ny olona 4 ary tsy maintsy ampiana 400 grama dia zarao 4 ary tsy misy olana, fa ny ora mahandro? Tokony hizara izany amin'ny 4 ve aho? Avelako amin'ny fotoana mitovy ve izy io na dia vitsy aza ny vola?
Tsy dia manana hevitra momba ny fandrahoan-tsakafo loatra aho, ka raisina an-tanan-droa ny sosokevitra rehetra.
Salama Juan, tsy mitovy ny fotoana fa tsy tokony hampihenanao azy ara-dalàna koa (amin'ny saosy, ohatra). Raha ny paty na ny vary dia mitovy ny fotoana satria io no fotoana ilana hanaovana azy ireo. Miarahaba ary misaotra betsaka anao nahita anay!
Salama, manao ahoana ianao, ny qrdan madio amin'ny fahafatesana miaraka amin'ny thermo tiako anontaniana anao fa nahitana fomba fahandro ho an'ny donut avy ao amin'ny pejy resipeo, Zedmomix fa tsy milaza hoe inona ny karazana lafarinina apetraka amin'ny lafarinina 300g fotsiny fa tsy milaza raha ny mahazatra na hery, na mofomamy raha afaka mamaha ny antoka ho ahy, satria te hanao ny donuts misaotra ...............................
Salama Sandra, vita amin'ny lafarinina mahery izy ireo. Mirary ny soa indrindra.
Omaly aho dia nanomana ity puree ity ho an'ny sakafo hariva, ary miaraka aminy miaraka amin'ny burger akoho. Mahafinaritra! Nieritreritra mihitsy aza aho fa tsara ny mandray azy io ho puree fa tsy toy ny haingo fotsiny. Misaotra betsaka zazavavy. Mirary ny soa indrindra.
MBA MIANGAVY RE; Azonao atao ve ny milaza amiko raha toa ka mendrika ny mividy ny maodely TM 21 teo aloha tamin'ny € 400? Fantatrao ve raha manana ny endriny sy ny kojakoja mitovy aminy izy na tsia? Mety ho vaovao amin'ny 2006? Misaotra
Salama Adela, ny tena marina dia tsy haiko izay holazaiko aminao satria tokony ho hitanao ilay masinina hahafantarana azy. Aleoko vaovao satria ampiasaiko tsy tapaka ary ho ahy dia tena ilaina izany. Ny fampiasam-bola vaovao dia mendrika izany, saika isan'andro no ampiasako azy. Mirary ny soa indrindra.
Adela Delgado dia hoy izy:
Misaotra indrindra tsara tarehy; Nisy mpiara-miasa tamiko nanontany ahy ary aleoko miresaka izany aminao. Efa nolazaiko anao izany. oroka
Valiny tamin'i Adela Delgado
Ity pure ity dia tsy maintsy tena tsara! Nanoratra azy aho satria ao an-trano dia mihintsana indray mandeha isan-kerinandro ireo menaka ary tiako miovaova.
Manantena aho fa tianao izany, Piluka, hoy ianao amiko. Mirary ny soa indrindra.
Omaly nataoko ity Puree ity ary tian'ireo paoma ireo.
Faly aho fa tianao izany, Maribel! Mirary ny soa indrindra.
Misaotra Elena, androany no nanomanako ny puree ary ny tena marina dia nahafinaritra tokoa. Misaotra betsaka, tsy fantatrao ny fanampianao ahy.
Salama e. Te hanontany anao aho raha ho an'ny olona 4 foana ny fomba fanamboaranao. esque manao korontana aho rehefa irery .. hahaha. ary tsara ihany koa zavatra kely hafa ho an'ity puree ity (izay hataoko rahampitso ...) azonao atao ve ny mametraka zucchini ohatra? sa karazana legioma fanampiny ?? Misaotra mialoha sy arahaba…
Salama Lore, saika ny resep rehetra dia ho an'ny olona 4. Ary amin'ny puree dia azonao ampiana legioma tadiavinao, alao antoka fa hanan-karena kokoa izy io. Miarahaba ary manantena aho fa tianao izany.
panto dia hoy izy:
Omaly no nanaovako an'io puree io ary nahagaga ny valiny !!!!, tiako ilay izy !.. Mbola manana ambiny kely aho ary manana izany ao anaty vata fampangatsiahana anio hariva. Niarahako izany niaraka tamin'ny elatra akoho nendasina nefa nieritreritra an'izay karazan-kena, nendasina na nendasina tsara fa tsy tokony ho ratsy. Fangatahana iray xq. Namela be dia be aho ary na dia nihinana ampy aza ary ny keliko koa, dia nijanona ihany aho.
Mamaly an'i panto
Salama Panto, faly be aho fa tianao io!. Eny azonao atao ny manala azy. Napetrako tao anaty tupperware ianao, akatoninao tsara izy ary apetraka ao anaty vata fampangatsiahana. Mirary ny soa indrindra.
Misaotra betsaka Elena amin'ny valin-teninao. Efa fantatro amin'ny fotoana hafa xq. Nohaniko ny ambiny rehetra …… .. matsiro!
MAMEN- dia hoy izy:
Alina farany dia nataoko mihinana anio io madio io. SORATRA TSARA IZANY ARY MAMONJY AZY, FA KEDA KOKOA KELY ARY TIA TANINDRAZANA CREMITA BE, NANORITRA RANO MASO IZAO. TIAKO IREO RESIPON'IZANY QUICK IREO satria tsy maintsy avelako ny sakafo ao amin'ny harivan'alina. SA maraina be vao maraina satria vita haingana izy ireo. veloma
Valiny amin'i MAMEN-
Namboariko ity ovy sy karaoty nopotsehina ity, tena tsara, ary izao vao nanao ovy nopotsehina aho ary samy be ranoka ny roa, tiako ho mifamatotra kokoa izy io. Hanaisotra ronono kely ve aho?
Misaotra amin'ny fanampiana sy torohevitra.
Lazao hoe eny Hank, tsara indrindra ho an'ny ankizy ny mihinana legioma nefa tsy tsapany akory ... miaraka amin'ny lohahevitra miloko ... tsy misy ifandraisany lol.
Ny karaoty sy ny ovy dia mafy tamiko. Mieritreritra aho fa hametraka ny ovy ao amin'ny varoma sy ny karaoty ao anaty harona.
Salama Chus, mety hokapohinao ho lehibe loatra izy ireo satria mandritra ny 30 minitra na inona na inona apetraka ao anaty harona na amin'ny varoma dia masaka tsara ny legioma. Andramo apetraka amin'ny ampahany kely kokoa ireo amin'ny manaraka. Misaotra nanoratra taminay!
Flan atody miaraka amin'ny varoma